DHAGEYSO: Wasiirka Gaashaandhigga oo sheegay inuu bilaabayo Dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka Al-shabaab | Baydhabo Online
DHAGEYSO: Wasiirka Gaashaandhigga oo sheegay inuu bilaabayo Dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka Al-shabaab
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhiga xukumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal shiikh C/raxmaan wareysi uusiiyay Warbaahinta Qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan la bilaabayo Dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka kaasooo Dalka looga saarayo argagaxusada naba diyo nolal diidka ah ee Al shabaab.
Mudane Maxamed Mursal shiikh C/raxmaan Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhiga xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in isbadal lagu sameeyay hugaanada taliska Xoogga Dalka si loo dar dar galiyo howlgalada maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Argagaxisa Al shabaab maadaama go,aanka Dowladda Federaalka Soomaaliya uu yahay in guud ahaanba Dalka laga xoreeyo nabad iyo nolal diidka Al shabaab.
Wasiirka ayaa sheegay in howlgalkaani uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama gulufkaan Dagaal uu hugaaminaayo Madaxweynaha JFS mudane Maxamed C//laahi Maxamed Farmaajo isagoona tilmaamay inuu dhamaaday waqtigii maleeshiyaadka Al shabaab ay dhibaatayn jireen Shacabka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo xoogan ku bixinaysa sidii maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al-shabaab looga saarayo deegaanada wali looga tuhmaayo Dalka ayna ku dhibaateeyaan dadka Shacabka ah iyadoona ay xusid mudan tahay in Ciidamada xoogga Dalka Soomaaliyeed ay maalmihii lasoo dhaafay guulo la taaban karo ka gaartay dagaal maleeshiyaadka looga qabsaday deegaano hor leh oo ka tirsan Gobalada Hiiraan,Bakool iyo Jubbada hoose.
Halkaan hoose ka dhageyso Codka Wasiirka Difaaca: